Adihevitra 3 novambra
Ny adihevitra natao ny 3 novambra no adihevitra farany tamin’ireo nalahatry ny TVM sy RNM. Nanana ny lanjany izany izy amin’izy nanakatona ireo adihevitra nalahatra izay satria isan’ny mipetraka ao antsofin’ny mpihaino sy mpanaraka propragandy ary koa nanana ny lanjany satria isan’ny nifanatrika tao i Marc Ravalomanana sy i Andry Rajoelina (mpifanandrina tamin’ny 2009). Fijery nalaina tao amin’ny Facebook no zaraina etoana.
Fifidianana eken’ny rehetra no vahaolana
JRR il y a 7 mois
Nanomboka ny talata 30 okitobra teo no nanomboka ny fangatahan’ireo kandida ho filoham-pirenena ny hanokafana indray ny lisi-pifidianana mba hahitsy sy hamboarina. Mbola tsy nahazo rariny izy ireo. Manohy ny "tolona" izy ireo. Araho.
Hajao ny fahamarinana sy ny fahadiovana
Mandalo kihon-dalana ny Firenena manoloana ny fifidianana tsy maintsy atrehina. Maro ny ahiahy mipetraka. Maro ireo te hampita hafatra sy antso avo. Isan’ireny ny Vaomieram-pirenena malagasy mitandro ny Hasina maha olona eo amin’ny Siansa sy ny Haitao. Toa izao izany antso avo izany.